Pandakaroora painge pasina baba vemukadzi, tete vacho vainge vari shamwari yamai vacho - Ndodii panyaya yakadai? - Masasi eHarare
Ask Tete Molly Pandakaroora painge pasina baba vemukadzi, tete vacho vainge vari shamwari yamai vacho...
Pandakaroora painge pasina baba vemukadzi, tete vacho vainge vari shamwari yamai vacho – Ndodii panyaya yakadai?
Pandakaroora painge pasina baba vemukadzi, tete vacho vainge vari shamwari yamai vacho – Ndodii panyaya yakadai? Ndakadanana nemusikana ndikamumitisa .Ndakaroora asi pandakaroora painge pasina baba vemukadzi tete vacho vainge vari shamwari yamai vacho.
Baba vake vakasiyana namai vake vari vadiki. So vekumhuri kwangu vakati vanoda kuona baba ivo vairamba vachiti anoda kunoona baba ngaende ega kuHarare so zvakatora nguva until last year .Vakatanga kuti huya utore mhuri yako ndakaramba vakamboedza kumuwuyisa natete vaye vekunyepa asi ndakaramba .
Now ndakaona kuti hapana imba apa ndakamupa gupuro akaramba. Zvinoita here? .Uku ndakuda kuroora umwe munaDecember muno ndakatopiwa date.Ndodii panyaya yakadai?
Nyaya yekuti munhu ana baba here inyaya yamai vake kwete yake. Haisi nyaya yekuti ungafunga kuramba munhu nayo uchiti nekuti hauna kuona baba vake. Varume pamwe kufunga munotadza zvachose, pamwe wagara hako wainge usingade kumoroora.
Kufunga kwangu semunhukadzi kunoti kana mukadzi ari munhu akakodzera kurara newe pasina kondhomu zvinoreva kuti munhu akakodzera kugadzira mwana newe.
Mukadzi uyu aratidza rudo kureva kuti munhu akakodzera kugara naye. Saka iyi mhosva yekuti haana kundotsvaga baba vake akauya navo kumhuri yemurume haisi mhosva ine musoro. Imhosva yekutsva marambiro okuita munhu asina mhosva.
kuroora pasina baba vemukadzi
Pandakaroora painge pasina baba vemukadzi